कुन टूथब्रश सबैभन्दा राम्रो छ? आधुनिक बनाम क्लासिक टूथब्रश
कुन टूथब्रश राम्रो छ | स्वास्थ्य
इलेक्ट्रिक टूथब्रश वा म्यानुअल टूथब्रश - एक तुलना
के अल्ट्रासोनिक ब्रश सामान्य टूथब्रश दिनहुन्छ?
अधिक सौंदर्यशास्त्रका लागि ध्वनि ब्रश र पूरक दन्त बीमा
आधुनिक ध्वनि प्रविधिहरू वा शास्त्रीय ब्रश - दाँतबर्षको कस्तो आकार दंत चिकित्सकहरूलाई सिफारिस गर्दछ?
सामान्य, बिजुली वा अल्ट्रासाउन्ड - जो टूथब्रश सबैभन्दा राम्रो छ?
दैनिक ब्रशको लागि, जर्मनहरू अझ नम्र र प्रगति गर्ने सम्भावना हुने देखिन्छ।
आधी भन्दा बढी भन्दा क्लासिक म्यानुअल टूथब्रश प्रयोग गर्दै।
र यद्यपि दन्त चिकित्सकहरू अहिले पनि पुष्टि गर्छन् कि दन्त चिकित्साले वास्तवमा म्यानुअल सफाई उपकरण बिना राम्रो काम गर्दछ।
विभिन्न विद्युतीय दाँत ब्रशको दायरा ठूलो छ र अझ पनि पछिल्लो पीढीले यसलाई सुस्तै बाथरूममा, अल्ट्रासोनिक ब्रशमा बनाउँछ।
तर नयाँ दाँतको ब्रश नवाचारले वास्तवमा मौखिक स्वच्छता सुधार गर्न योगदान गर्दछ? वा हामी बिना यो गर्न सक्दैनौं?
निस्सन्देह, विद्युतीय टूथब्रशहरूसँग पारंपरिक मैनुअल टूथब्रशहरूको तुलनामा एक ठूलो हानि छ - तिनीहरू धेरै महान् छन्! यद्यपि, विशेषज्ञहरु र दन्त चिकित्सकहरु लाई विश्वास छ कि यस्तो दाँत को ब्रश को खरीद सार्थक छ, सबै भन्दा पछि, दांत एक धेरै महत्वपूर्ण कार्य हो र संरक्षित हुनु पर्छ र संभव को रूप मा बनाए राखन को लागि। तो एक टूथब्रश को फायदे के हो?
सबसे पहिले, आवेदन धेरै सजिलो छ, किनकि अधिकतर ब्रश ब्रश हेड स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ र गतिमा जुन हातले नकल गर्न सकिँदैन। सामान्यतया, अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरू राम्रो हासिल भएको छ, जसले विभिन्न परीक्षणहरू पुष्टि गर्न सक्छ।
सायद सबै भन्दा ठूलो फाइदा ईनमेलको क्षेत्रमा छ, किनभने यो बिजुलीको दाँतको ब्रशले रगतको साथमा बगाएको छ। त्यसैले यदि तपाइँसँग संवेदनशील दाँत छ वा गम समस्याहरू बढी सम्भावना छ भने तपाईले विद्युत ब्रशमा स्विच गर्नुपर्छ।
सफाई नतिजा निष्कर्ष राम्रो छ र एकीकृत टाइमरले उपभोक्तालाई थाहा पाउन अनुमति दिन्छ यो परिणामको लागि यो कति लामो समयसम्म लिन्छ। व्यावहारिक यो बच्चाहरु को लागि विशेष गरी हो।
यद्यपि म्यानुअल टूथब्रशले कम मूल्य, एक सरल आवेदन र विभिन्न additives - जस्तै ब्रशको पछाडि जिब्रो क्लीनरको साथ स्कोर गर्न सक्छ, तर आंदोलनहरू सधैँ म्यानुअल रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
साथै, सबै स्थानहरू र रिक्त स्थानहरू पुग्न नसक्ने र दन्त प्रवाहको प्रयोग आवश्यक छ। केवल जो एक साँच्चै राम्रो ब्रश टेक्नोलोजी मास्टर गर्ने सबै जीवाणुहरू हटाउन र पट्टिकाको परिणाम हुन सक्छ। र मात्र यदि यो खाली छ र कम से कम5मिनेटको लागि झाडिएको छ।
जहाँसम्म हाम्रो मौखिक स्वच्छता चिन्ताजनक छ, त्यहाँ बजारमा कुनै स्ट्यान्डिल जस्तो देखिन्छ। यसबाहेक, विद्युतीय दाँतको ब्रह्मा पनि, जुन वास्तवमा एक धेरै राम्रो सफाई परिणाम प्राप्त गर्न, बजारबाट धकेलियो। ध्वनि दाँतको ब्रह्मा अब हामीले सबै प्रयोग गर्नुहुने सबै भन्दा माथि हुनुपर्छ। किन?
ध्वनि टूथब्रश प्रति मिनेट 31.000 कंपन सम्म पुग्छ, जसले धेरै अन्य लाभहरू ल्याउँछ। सफाईको महसुस सामान्य "ताजा-देखि-द-दन्त चिकित्सक भावना" र धेरै प्रयास बिना तुलना गर्न सकिन्छ।
विशेषज्ञहरूले अझ धेरै सटीक सफाई गर्न र कफी वा निकोटीन जस्ता भित्ताको क्षेत्रमा पनि सक्षम बनाइदिएको छ, ध्वनिक ब्रशले फाइदा पाउन सक्छ। हालको नतिजाहरूले पनि साबित गर्छन् कि ध्वनि का ब्रश तीर्थका विरुद्ध उत्तम प्रोफिलक्सिस हुन्।
र केवल2मिनेटमा, किनभने ध्वनि टूथब्रशले लामो समयसम्म सबै दाँतमा दाँत सफा गर्न सक्दैन।
तर: ध्वनि दाँतको ब्रह्मा ठूलो मात्रामा खर्च गर्न सक्दछ र सफाईको समयमा ध्वनि आवाज पहिलो पटक चिन्ता गर्न सकिन्छ।
अन्यथा, ध्वनि उत्पादनहरूको हानि सीमित हुन्छ, सबै पछि, यो नवीनतम ध्वनि प्रविधि हो जुन संवेदनशील दाँत र गम समस्याहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अधिक छ, विशेषज्ञहरु लाई सहमत छ कि गोंद समस्याहरु को लागि आउछ जब बाथरूम को लागि राम्रो ब्रश पनि सही उपकरण हो।
दन्त चिकित्सा बीमा सधैं मेडिकल आवश्यकतासँग जोडिएको छैन। त्यहाँ उपलब्ध छन् जुन मुख क्षेत्रमा राम्रो एथ्याटिक्सका लागि स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा योग्य छन्।
उदाहरणको लागि, केहि प्रोम्फैक्टिक उपायहरू वा ओर्थोडन्टिक उपचारहरू केही बीमा नीतिहरूमा समावेश छन्, जस्तै सिरेमिक इनलिले प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईं यस्तो अतिरिक्त दन्त बीमा निकाल्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं राम्रो ध्वनि दाँतको ब्रशको साथ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि बीमालाई पनि दावी गर्न सकिदैन।
त्यसैले यो आवश्यक हुन सक्छ पछि अधिक दन्त चिकित्सक द्वारा whitening, साथै आधे साढे दाँत को सफाई। यो हालको पुष्टि भएको छ कि दाँत ब्रशको साथमा दाँतको ब्रश बस तिमाहीको दाँत सफा गर्ने रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।
पहेली - कुन दिशामा बस यात्रा गर्दछ?